युरेनियम के हो ? कहाँ–कहाँ हुन्छ यसको प्रयोग - Khula Patra
युरेनियम के हो ? कहाँ–कहाँ हुन्छ यसको प्रयोग
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७
प्रकाशित समय: २३:४३:०४
नेपालमा पालमा पहिलोपटक युरेनियम बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले बिहीबार साढे २ किलो युरेनियम बरामद गरेको हो । आखिर के हो त युरेनियम ? धर्तीभित्र एउटा यस्तो चीन पाइन्छ, जो देख्नमा अत्यन्त सुन्दर, सफा र चमकदार छ र हावाको सम्पर्कमा आउनासाथ स्वयम् जल्छ । यसको नाम हो युरेनियम ।